Google+ ayaa si joogto ah u xirmi doonta Abriil 2019 | Androidsis
Bilowgii Oktoobar, war la helay oo dad badani sugayeen ayaa la xaqiijiyey. Google+, shabakadda bulshada ee shirkadda, oo aan run ahaantii waligeed iska bixin, waxay ahayd inuu albaabada u laabo. Isticmaalka yar ee ay laheyd ayaa kamid ahaa sababaha, laakiin sidoo kale dhibaato amni oo ay sababtay in shirkadu qaadatay go aanka lagu xidhayo shabakadan bulshada. Mid ka mid ah mashaariicda shirkadda ee aan waligood dhammeyn.
Isticmaalayaasha isticmaalay shabakada bulshada, waxaa suurtagal ahayd in laga soo dejiyo dhammaan xogtooda, sidaan horeyba halkan kuugu sheegnay. Laakiin waxay u muuqataa taas xiritaanka Google+ ayaa la filayaa. Xadgudub amni oo cusub ayaa sababay in shirkadda ay go’aankan gaarto. Horumar afar bilood ah.
Qorshihii ugu horreeyay ee shirkaddu waxay ahayd inay xirto arjiga bisha Ogosto 2019. Laakiin, ka dib jebinta amniga cusub ee ka jirta, xiritaankan waxaa horay loo keenay wadar ahaan afar bilood. Marka taas Abriil 2019 barnaamijka ayaa la filayaa inuu xirmo si hufan. Go'aan saamaynaya 52 milyan oo adeegsadeyaal ah oo leh xisaabaadka Google+.
Sababta horumarkan ayaa ah khal khal amni oo cusub. Xaaladdan oo kale, waa cilad ku jirta barnaamijka API. Markii abka la waydiiyey inuu marin u helo xogta astaanta isticmaalaha, helay ogolaansho si loo helo dhammaan xogta, oo ay ku jiraan kuwa loo calaamadeeyay inay yihiin kuwo gaar loo leeyahay. Google lafteeda ayaa ogaatay guuldarada, taas oo saameysa 52,2 milyan oo isticmaaleyaasha barta.
Isticmaalayaasha Google+ ayaa la filayaa inay ka helaan ogeysiis shirkadda lafteeda. Uma muuqato in xogta maaliyadeed, furaha sirta ah ama macluumaadka kale ee gaarka loo leeyahay la saameeyay. Sidaas darteed, shirkaddu waxay go'aansatay jar marinka API-ga 90 maalmood gudahood. Marka tani mar dambe ma dhacayso.
Sidaa darteed, dhammaadka Google+ ayaa inyar u dhow. Waxay noqon doontaa bisha Abriil marka shabakadda bulshada ay si joogto ah u xirmi doonto. Haddii aad ku hayso astaan, ha iloobin inaad soo dejiso xogtaada ka hor inta ay goori goor tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Google wuxuu horumariyaa xiritaanka Google+ sababo la xiriira khalkhal amni
Telegram waa loo casriyeeyay Android iyadoo qaab cusub loo sameeyay